Herer - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Harar)
Haku khaldin Harare, caasimada dalka Simbaabwi
Caasimad in Gobolka Harari, EthiopiaTemplate:SHORTDESC:Caasimad in Gobolka Harari, Ethiopia
Dhismaha qadiimiga ah ee Harar
Meesha ka dhacdo Itoobiya
Herer () loo qori jirey Harrar ama Harer sidoo kale loo yaqaano Gēy, waa caasimad qadiimi ah oo ku taala bariga wadanka Itoobiya. Magaalada Herer waxay xarun u ahaan jirtey Boqortooyadii Hararghe maanta ka mid ah wadanka Itoobiya.
Guud ahaan, magaalada Herer waxay dhacdaa badhtamaha Deegaanada Sare ee Itoobiya waxayna leedahay joog-badeed dhan 1,885 m. Intaas waxaa dheer, magaalada Harar waxayna shan boqol kilomitir u jirtaa caasimada Addis Ababa. Sida lagu xusay Buuga CIA sanadkii 2005tii waxaa magaalada Herer ku noolaa bulsho dad dhan 122,000, kuwaasi oo 60,000 ahaayeen rag iyo 62,000 dumar ah.
Madaxdii harar soomartay madaxda ugu caansan waxaa ka mid ahaa Garaad Axmed gurey oo ka dhashay lafta reer Gasas garaad.
Harar waxa ay ahayd magaalooyinka ugu caansan geeska africa qarnigii 11, harar waxa ay mar noqotay magaala madaxdii islaamka ee geeska africa sida laga dareemaayo radadkii culimada dhariiqada soomaaliyeed ee xilligaasi noolaa, mid walbo oo culimadaasi ka mid ah waxa uu cilmigiisa ku soo qaatay ama ku bilaabay magaaladaa faca weyn. hadaba magaalada harar yaa deegaan ahaan iska leh ma soomaali baa leh mise oromo?
magaaladan waxaa iska leh qoomiyadda soomaalida ah ee la dhihi jiray soomaali galbeed. Qabiilka ugu badan ee soomaalida ah ee magaaladaas degana waa qabiilka layiraahdo karanle hawiye gaar ahaan lafaha kala ah
kidir karanle iyo
waadero karanle dhul ahaan waxa uu degaa koofurta soomaalia.
Sawirada magaalada Harar
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Herer&oldid=211689"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 May 2021, marka ee eheed 18:54.